Kukanda Swing Tarisa Mavharuvhu
2pc Kukanda Zvinoyerera Bhora Mavharuvhu
2pc ndokugadzira zvinoyangarara bhora mavharuvhu
3pc ndokugadzira Trunnion Ball mavharuvhu
Wepamusoro Kupinda Bhora Mavharuvhu
Nhatu Nzira Ball Valves
Kukanda magedhi mavharuvhu
Kukanda Globe Mavharuvhu
Kukanda Tarisa mavharuvhu
1- Kukanda Carbon Simbi, Stainless Simbi, Duplex, Yakakosha Zvishandiso
2- Flange inoguma uye garo Welded
3- Simbi yakagara
4- Bolt Bonnet uye Pressure Seal Bonnet
Swing cheki vharafu
H44H-swing cheki vharafu
2 "" 48 "(50mm ～ 1200mm)
-196 ℃ ～ 593 ℃ (huwandu hwetembiricha yebasa hunosiyana pazvinhu zvakasiyana)
Main zvinhu: A216 WCB, WCC; A217 WC6, WC9, C5, C12, C12A, CA15; A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, CN3MN, CK3MCUN, CN7M; A352 LCB 4CC; M35-1, A995 4A (CD3MN), 5A (CE3MN), 6A (CD3MWCuN), ASME B 148 C95800, C95500, nezvimwe.
Ikoji yevhavha inogona kuvhurwa otomatiki uye kuvharwa neyepakati simba, kufamba kwehuremu kunogona kuwedzerwa kuita kuti kuvharwe nekukurumidza kwevhavhavhavhavha, hydraulic cylinder inogona kuwedzerwa kuti itakurise inononoka kuvhara kwevhavhavha yekuvhara kudzivirira vibration yepombi, uye pigging inogona kuitwa kuburikidza nekuvhura kwebhuku uye nekuvhara iyo vharuvhu yakavharika panzvimbo yekuvhura.
Yekushandisa: mafuta ekumahombekombe, peturu yekuchenesa, petrochemical engineering, kemikari mainjiniya emagetsi indasitiri yemagetsi, nezvimwe.
Kumwe kutaura 1
Kuiswa chisimbiso kwezvigaro zvevharuvha uye vharuvhu kuturika zvakavakirwa-zvine welded neyakaomarara chiwanikwa kugadzirisa kusagadzikana kwekupokana uye kuwedzera hupenyu hwebasa revhavha.
Kumwe kutaura 2
SS + graphite kana simbi yesimbi kana kumanikidza kuzvisimbisa kunoitwa pakati pemuviri wevhavha nebhoneti yekuisa chisimbiso chakavimbika.
Kumwe kutaura 3
Inokodzera yekudzivirira backflow yekudzivirira mupombi kana mudziyo
Kumwe kutaura 4
Makuru mavharuvhu akagadzirwa ne hydraulic damping cylinder kudzivirira vharuvhu kubva pakurova chigaro chevhavha, ichikuvadza vharuvhu kana kukonzeresa kutetepa kwepombi nekuda kwekuvhara nekukurumidza.
Kumwe kutaura 5
Kana paine pigging inodiwa, API 6D swing cheki vharuvhu inogona kuitwa nemaoko kuvhiyiwa kugadzirisa nzvimbo yekuvhura yevhavhavhavha, kuti uzadzise iyo pigging chinangwa.
Kune kabhoni yesimbi cheki vharuvhu, chigaro chinowanzo kuvezwa simbi, iyo yekuisa chisimbiso pamusoro pechigaro inopfapfaidzwa nesimbi yakaoma yakatsanangurwa nemutengi. Chigaro chinogadziriswazve chinoshandiswa cheNPS kana uchikumbirwa nemutengi, welded pachigaro inoshandiswa NPS> = 12 kabhoni simbi yekuongorora mavharuvhu, yesimbi isina waya yekuongorora vharuvhu, chigaro chakakosha chinowanzo gamuchirwa, kana kusungira yakaoma alloy zvakananga zvakasangana. yesimbi isina waya yekuongorora mavharuvhu kana uchikumbirwa nemutengi.
Pashure: Kukanda Y Globe Valves
Zvadaro: Kukanda Globe Mavharuvhu
API 600 GGC mavharuvhu
API 603 SS GGC mavharuvhu
PSB GGC mavharuvhu
Kukanda Y Globe Valves